Umhla wokubonisa weXiaomi Black Shark 2 isemthethweni | I-Androidsis
I-Xiaomi yenye yeempawu esele zine-smartphone yayo yokudlala kwintengiso. Nangona uphawu lwaseTshayina Sele elungiselela ukwazisa isizukulwana esitsha sale Black Shark. Kuxelwe iiveki ezimbalwa ukuba le fowuni inokufika ngaphambi kokuphela konyaka, ukukhuphisana nefowuni entsha yeRazer. Kwaye ngoku sinedatha engaphezulu kwinkcazo-ntetho yesi sixhobo, kuba umhla wayo wokubonisa sele usemthethweni.
Ezona veki zixakekileyo ngaphambili kuphawu lwesiTshayina. Ngale ntsasa se ubhengeze umhla wokubonisa weXiaomi Mi Mix 3 kwaye ngoku Kuza kubhengezwa umhla wokufika kwale Black Shark 2 intsha Kwintengiso. Kwiveki singadibana naye.
Iya kuba nge-Okthobha 23 xa le Xiaomi Black Shark 2 iziswa ngokusesikweni. Isizukulwane esitsha sophawu lomdlalo waseTshayina i-smartphone iya kuba semthethweni kungekudala. Eli licandelo elikhulayo, kwaye bafuna ukuthatha ithuba leziphumo ezilungileyo ezinazo le modeli kwintengiso.
Inkampani iya kubamba umsitho e-China apho izakubonisa khona le modeli. Okwangoku asinayo nayiphi na idatha kwiinkcukacha zayo. Kukho amarhe, kodwa akukho nto ibambekayo. Njengakwisizukulwana sokuqala, isixhobo esinamandla kakhulu kunye nokusebenza okuhle silindele.
Kubonakala ngathi le Black Shark 2 izakukhutshwa kwihlabathi liphela. Ifowuni yokuqala khange ibe nokusasazwa okugqwesileyo kwihlabathi liphela, kodwa kubonakala ngathi uphawu lufuna ukuyitshintsha ngesi sixhobo sitsha. Ukuze sikwazi ukuyithenga kwiimarike ezininzi, kunokwenzeka ukuba iSpain iphakathi kwabo.
Kwiveki siza kuyazi yonke into malunga nale Xiaomi Black Shark 2. Siya kunika ingqalelo kwidatha esiyifumana kwifowuni. Kwaye siya kuwulandela lo msitho ngomdla nge-23 ka-Okthobha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » IXiaomi Black Shark 2 sele inomhla wentetho
Uyicwangcisa njani iBlokada, eyona blocker yentengiso yewebhu, usetyenziso kunye nemidlalo